वीर अस्पताल मुनिको चि’हानमा पुरिएका अधुरा सपनाहरु « Swadesh Nepal
वीर अस्पताल मुनिको चि’हानमा पुरिएका अधुरा सपनाहरु
प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७६, आईतवार
विनय काफ्ले- यो सपना एक जनाको होइन। न दशौ या सयौ को। यो सपना हो वर्षेनी हजारौ को । वर्षौको अध्ययनले खिआएको दिमाग र परिश्रमले खियाएको नङ लिएर विशेषज्ञ बन्ने सपनाको झोला बोकेर ऊ काठमांडौ आइपुग्छ। न्युरोड पुग्दैगर्दा सिमसिम पानीमा रुझ्दै पाकेटको रुमाल निकाली चश्मा पुछ्न थाल्छ। केहि पाइला अघि सारेपछि एक अद्भुत दृश्यको अनुभुति गर्छ। आफ्नो अगाडि देशकै ऐतिहासिक वीर अस्पताल देखेर उ दंग पर्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अर्थात छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सबैभन्दा बढी सिट भएको देशको एकमात्र शिक्षण संस्था।
उक्त सपनालाई पछ्याउदै यहासम्म आउपुगेको उ सम्झन्छ। त्यो सपनामा कैयौ पटक हिलो छ्यापिए, कैयं परिष्थितिले उक्त सपनाको चिर हरण गर्न खोजे। ती सबै कुराहरुलाई परास्त गरेर उ यहाँ आइपुगेको हो। उसको सपना उसले आफूभन्दा सफा राखेको छ, सुरक्षित राखेको छ, पवित्र राखेको छ। वीर अस्पतालको पेटिमा विश्रामको लामो शासपछि उसले पुन: त्यो सपनालाई समझन्छ र आफैसंग प्रतिज्ञा गर्छ, अठोट गर्छ, संकल्प गर्छ। वर्षौदेखी बोकेको सपना अनुरुप जसरी पनि वीर अस्पतालको प्रवेश परीक्षाको मेरिटमा नाम निकालेरै छाड्ने र रेजिडेन्सीको यात्रा शुरु गर्ने।
परीक्षा अगावै बचेका समय दिनरात एक गरी उ पढ्न थाल्दछ। भोक, प्यास र निद्रा सबै बिर्सेर खुला आँखाले सपनालाई पछ्याइरहेको उ रबर्ट फ्रस्टको शब्दहरुको उर्जाले आफ्नो दिमागका कोशिकाहरुलाई प्रज्वलित राख्दछ।
हेर्दा हेर्दै परीक्षा पनि आउछ, कठिन मिहिनेतले आर्जको आफ्नो ज्ञान र विवेकको सक्दो प्रयोग गर्छ। परीक्षा सकिएर फर्कनासाथ कैयो दिनको अनिद्रा र थकानले उसलाई गहिरो निद्रामा लिप्त बनाउछ। उ सपना देख्तछ , छात्रवृत्तिमा नाम निकाली पढेको, परीक्षा टप गरि छात्रवृत्तिमा पढे बापत देशका विभिन्न कुना काप्चामा गइ गरीव, दु:खी र असहायहरुको सेवा गर्ने उच्च अभिलाषा पुरा भएको।
तर विपनाको यथार्थताले अर्कै मोड लिन्छ। एउटा वाक्य जुन उसको अन्तस्तलमा जीवनभर गुन्जन्छ “ बाबु! तिमी त सरकारी होइनौ”……..”बाबु! तिमी त सरकारी होइनौ”
आज वीर अस्पतालको चिहान मुनी यस्ता हजारौ सपनाहरु पुरिएका छन्। ती सपना धारण गर्नेहरु कोही बाध्यताले विदेशीएका छन् कोही देशमै अनिर्णयको बन्धी बनिरहेका छन्। यसवर्ष पनि पुरानै व्यवस्था बमोजिम फाराम खुल्दै छ। देशका ८५% डाक्टरको नागरीकता माथि पुन प्रश्न खडा हुदै छ। तर हामी शान्त छौ, हामी बेमतलबी छौ, हामी आयाशी छौ किनकि हामीलाई आफ्नो नागरीकताको प्रवाह छैन। हामी वन्दी छौ, त्यस मानसिकताको जुन व्यक्तिगत प्राथमिकतामा निहित छ। हाम्रा सपनाहरु केवल सपनामै सिमित छन्। हाम्रा सपनाहरुमाथि कोत पर्व मनाइदा हामी ताली बजाएरै समय विताउछौ र केही क्षणपश्चात सधै भन्ने गर्छौ “ यार! हामी माथि धेरै नाइन्साफी भयो”।
माथिका शब्दहरुको संकलन न त कथा, न निवन्ध न कुनै स्तम्भको प्रारुप हो। अधिकारमाथिको निषेध सम्बन्धमा असफल शब्दहरुको खेस्रा जुन हामी भित्रैका अस्पष्ट, अपुरो, अस्थिर र अनिर्णीत धारणाहरुको चित्रण हो।
लेखक डा. काफ्ले गैरसरकारी चिकित्सक एवं मेडिकल ब्लगर हुन्।